(Redirected from Nana Akufo Addo)
William Addo Dankwa Akufo-Addo a yenim no sɛ ¨ɔkɔdeɛ Ani no, Wɔwoo no wɔ Ɔbenim bosome da a Ɛtɔ so Aduonu nkron wɔ Afe Apem Aha-nkron Aduanan nan mu. Ɔyɛ nnei Ghana Manpanin. W'adi mampanin firi Ɔpɛpɔn bosome mfeɛ mpem mmienu ne du-nson. Ɔdii kan somm sɛ Attorney General firi mfeɛ mpem mmienu ne baako kɔsii mfeɛ mpem mmienu ne miɛnsa ɛna ɔsane yɛɛ Ɔman soafoɔ a ɔhwɛ amanɔne nsɛm so firi mfeɛ mpem mmienu ne miɛnsa kɔsii mfeɛ mmienu ne nson ɛwɔ Kuffor berɛ so.
Nana Addo dii kan kɔperee Ghana manpanin akonwa no wɔ mfeɛ mpem mmienu ne nwɔtwe ɛne mfeɛ mpem mmienu ne du-mmienu, ne mmienu nyinara sɛ New Patriotic Party (NPP), nanso National Democratic Congress nii a ɔgyinaeɛ maa wɔn no dii ne so nkunim ɛyɛ John Evans Atta Mills wɔ mfeɛ mpem mmienu ne nwɔtwe mu, ɛna John Dramani nso bɛdii so mfeɛ mpem mmienu ne du-mmienu berɛ a John Evans Atta Mills wuieɛ no. Ɔsane yii no sɛ ɔmɛdi NPP kuo no anim sɛ Frankaatufoɔ a ɛtɔso miɛnsa mma NPP wɔ mfeɛ mpem mmienu ne du-nsia abatoɔ berɛno mu,na, bereɛ wei mu deɛ ɔdii John Dramani Mahama no so nkunim wɔ berɛ a ɛdikan no mu (ɔnyaa 53.85% mma), a wei ne berɛ a ɛdikan wɔ Ghana abatoɔ mu a opposition nii no a ɔgyina sii akan no anya mma bebreeɛ a ɛdikan no mu.
Abrabɔ Ahyaseɛ ne Sukuu[sesamu]
Ɔwoo Nana addo Dankwa Akufo Addo wɔ Nkran,Gaana, maa abusua a aheniesɛm ne amanyɔsɛm ɛwɔ mu sɛ Edward ne Adline Akufo-Addo ba. Ne papa Edward Akufo Addo firi Akropɔn-Akuapem ,na ɔyɛ Gaanafoɔ Chief Justice a ɔto so miɛnsa firi mfeɛ apem aha-nkron ne aduosia nsia de kɔsii mfeɛ apem aha-nkron aduoson , na ɔyɛ Ɔtitena nii nso wɔ afe apem aha-nkron aduosia nson de kɔsii aduosia nwɔtwe ɛna constitutional commission ne wɔn a wɔnka Gaana manpanin mpaninfoɔ no ho firi mfeɛ apem aha-nkron aduoson de kɔsii mfeɛ apem aha-nkron aduosia mmienu.
Na, Akufo-Addo maame afa no,ne nanabɛrema yɛ Nana Sir Ofori Atta, Akyem Abuakwa hene, na ɔno nso ka mpaninfoɔ a na ɔhwɛ Gold Coast no ho ansaana Ghana ɛbɛ nya ne faahodie. Ɔyɛ Kofi Asante Ofori Atta ne William Ofofr Atta wɔfaase. Ne wɔfa a ɔyɛne nana ne J.B Dankuah,a na ɔno nso ka Nsia Kɛseɛ no ho. Ɔhyɛ ne nkɔdaa birem sukuu wɔ Government Boys Sukuu, Adabraka, nna akyirei ɔkɔɔ Rowe Road Sukuu (a ɛnei ɔfrɛ no kinbu) no nyinaa wɔ Accra Central. Ɔkɔɔ amanone kɔtoa ne sukuu so kɔtwerɛɛ O-level ne A- level nsɔhwɛ wɔ Lancing College, Susseɔ,a Ɔmaa no agorɔdin ¨Billy¨ . Ɔhyɛɛ Filɔsɔfi, Amanyɔsɛm ne ɛkɔnɔmiks nnwoma ase wɔ New College, Osford wɔ mfeɛ apem aha-nkron aduosia mmienu, nanso ankyɛ na ɔgyaeɛ. Ɔsan nakyi baa Ghana wɔ.
Mpeɛ apem Aha-nkron Aduosia mmienu mu ɔbɛkyerɛ adeɛ wɔ Accra Academy, ansaana ɔkɔsua Economics ɛwɔ Legon Suapɔm mu, wɔ mfeɛ ampem aha-nkron aduosia nan, na ɔynan BSc Economics wɔ afe apem aha-nkron aduosia nson. ɔde ne ho kɔdɔm Inner Temple maa wɔn lete no sɛ asɛmdifoɔ ɛwɔ apprenticeship system a ɔnim no sɛ Inns of Court a wɔn angye asɛmdifoɔ krataa biaa. Ɔferɛ no kɔɔ English Bar(Middle Temple) wɔ kutawonsa bosome wɔ mfeɛ npem aha-nkron aduoson baako. Na ɔferɛ no Ghanaian bar wɔ kutawonsa bosome wɔ afe apem aha-nkron aduoson num. Akuffo Addo yɛɛ adwuma wɔ Law Firm Brothers a ne Paris office wɔ USA. Wɔ mfeɛ apem aha-nkron aduoson nkron mu no, ɔyɛɛ Law Firm no Prempeh and Co.
Akufo Addo amanyɔsɛm a ɔbɛkaa ho no hyɛɛ aseɛ firi mfeɛ apem ahankron aduoson a ɔde ne ho kɔdɔmm People's Movement for Freedom and Justice, ɛkuo a ɔhyehɛeɛ sɛ ɔne General Acheampong kuo no de bɛsi ani a na wɔn nso din de Supreme Military Council's Union Government Proposals. Wɔ Kɔtonimaa bosome da afe apem ahankrono aduokron-num mu no, na ɔka ɛkuo kɛseɛ bi a ɛyɛ adesuafoɔ a ɔhyehyɛɛ Alliance for change. Alliance a wɔn hyehyɛɛ
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Nana_Akufo-Addo&oldid=21464"